Ahoana ny fomba hamafana ny kaonty Snapchat? - Ara-Tsosialy
Ahoana ny fomba hamafana ny kaonty Snapchat?
Nandany fotoana be dia be tamin'ny fitazonana ny tadin'ny Snapchat ary ankehitriny te-hanary azy rehetra ve ianao?Na inona na inona antony tokony hialanao amin'ny Snapchat, eto izahay hanampy anao amin'izany. Androany amin'ity lahatsoratra ity dia nanomana torolàlana isan-tsipiriany sy feno izahay izay hanampy anao hamafa ny kaontinao Snapchat ary hanafaka ny tenanao.
Ity torolàlana ity dia hanana fomba roa hamafana ny kaontinao Snapchat sy ireo antony sasany mety hoeritreretinao indray mandeha alohan'ny hamafana ny kaontinao.Ka tsy manemotra intsony, andao hiroboka ao anatiny.
Whatsapp Statistics & Facts (2020) tokony ho fantatrao
Fomba famafana ny kaontinao Snapchat:
Ny mamafa ny kaonty Snapchat dia asa tsy miraharaha. Azonao atao ny mamafa ny kaonty Snapchat ao anatin'ny minitra vitsy monja raha manaraka ireo dingana voalaza etsy ambany ianao. Ny dingana hamafana ny kaontinao Snapchat dia:
Fomba # 1 hamafana ny kaonty Snapchat:
Tsidiho ny tranokala ofisialin'ny Snapchat na kitiho Eto .
Midira ao amin'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fampidirana ny anaranao sy ny tenimiafinao ho an'ny kaonty tianao hamafa.
Rehefa tafiditra ao ianao, dia hoentina mankany amin'ny pejy iray amin'ilay kaonty mamafa. Eto ianao dia tsy maintsy mampiditra ny teny miafinao mba hanamafisana ireo voafafao.
Raha vao miditra ny teny miafinao ianao ary miditra dia miditra ny kaontinao ho voafafa mandrakizay.
Fomba # 2 hamafana ny kaonty Snapchat:
Tsidiho ny tranokala ofisialin'ny Snapchat amin'ny fipihana Eto .
Raha vantany vao eo amin'ny pejin-tranonkala ofisialin'ny Snapchat ianao dia hidina hatrany amin'ny farany ambany amin'ny pejin-tranonkala ary eo ambanin'ny fizarana 'Community', kitiho ny 'Support'.
Rehefa nivoaka izy dia tsindrio ny Snapchat Support eo amin'ny takelaka ‘My Account & Security’ izay misy eo amin'ny ilany havia amin'ny pejin-tranonkala.
Raha vantany vao ao amin'ny 'My Account & Security' dia hahita takelaka 'Account Account' ianao. Tsindrio eo raha hijery safidy hafa.
Ao amin'ny takelaka fampahalalana momba ny kaonty dia tsindrio ny 'Delete My Account' izay hanokatra bara hafatra izay hanana torolàlana fohy izay hahitanao rohy mankany amin'ny Portal Account izay hitarika ny pejy fidirana ao amin'ny Snapchat.
Ampidiro ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa Snapchat anao.
Aorian'ny fampidirana ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa anao dia hamafa ny pejy kaonty ny pejy web izay tsy maintsy ampidirinao ny teny miafina Snapchat hamafana ny kaontinao.
Zava-dehibe tokony hodinihina Alohan'ny hamafana ny kaonty Snapchat
Mety misy zavatra ilaina hodinihina alohan'ny hamafana ny kaonty mety ho manan-danja aminao. Ireto misy zavatra vitsivitsy tokony hodinihinao alohan'ny hamafana ny kaontinao.
Vantany vao mamafa ny kaontinao Snapchat ianao, hoesorina ny sarinao sy ny horonan-tsarinao voatahiry ao amin'ny kaonty Snapchat, ary tsy ho azonao idirana izany.Mba hisorohana an'izany dia azonao atao ny maka sary an-tsary ny sary sy horonan-tsary rehetra ao amin'ny fitaovanao, mba hanananao ny haino aman-jery Snapchat alohan'ny hamoizanao azy rehetra.
Aorian'ny famafana ny kaonty Snapchat anao dia ho tapaka ny isa misy anao sy ny namanao izay hanasongadina ny adala Snapchat sasany.
Ka ity dia lahatsoratra fohy nefa feno momba ny fomba ahafahanao mamafa ny kaonty Snapchat anao amin'ny dingana manaraka. Raha manana fanontaniana mifandraika amin'ny famafana ny kaontinao Snapchat ianao dia ampahafantaro anay ao amin'ny boaty hevitra etsy ambany.
Ahoana ny fomba hamafana ny kaonty Gmail?
Fafao vetivety ny kaonty Instagram anao
Ahoana ny fomba ahazoana kaody Xbox Live maimaim-poana?
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Microsoft Office?
tsara kokoa ny netflix noho ny hulu
youtube to mp3 converter download maimaim-poana
ahoana no anaovanao ny akanjonao amin'ny roblox
fampidinana sarimihetsika maimaim-poana tanteraka tsy misy mpikambana
sarimihetsika maimaim-poana putlocker tsy misoratra anarana
misintona sarimihetsika maimaim-poana tsy misoratra anarana
ny fomba hahazoana robux haingana sy mora